EFESỌS 2 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (EFE 2)
Na mgbe ochie, unu bụ ndị nwụrụ anwụ nꞌime mmụọ unu nꞌihi na ndụ unu jupụtara na mmehie na nnupụ isi. Ma Chineke emeela ka mmụọ unu dịkwa ndụ ọzọ.
Nꞌihi na unu bụ ndị biri na mmehie na mgbe ochie, na-agbaso ụzọ ọjọọ nile nke ụwa. Unu na-erubekwara ekwensu isi, onye na-achị mmụọ ọjọọ nile bi nꞌikuku, onye ya onwe ya bụ onye anya na-adịghị ahụ. Ọ bụkwa ekwensu na-achị ndị nile na-adịghị erubere Chineke isi.
Ma ebere Chineke bara ụba nke ukwuu! Ịhụnanya ya nꞌebe anyị nọ dịkwa ukwuu!
Nꞌihi na mgbe mmụọ anyị nwụrụ anwụ nꞌime mmehie, Chineke nyekwara anyị ndụ ọzọ mgbe o mere ka Kraịst site nꞌọnwụ dịrị ndụ. Nꞌihi na ọ bụ site nꞌamara Chineke ka e jiri zọpụta anyị.
Dị ka o siri kpọlite Kraịst site nꞌọnwụ, otu a ka Chineke siri kpọlitekwa anyị site na ndụ ochie anyị, mee ka anyị soro Kraịst nọkọọ nꞌeluigwe.
Ọ dịghị ihe ọ bụla unu pụrụ isite nꞌihi ya nyaa isi, ebe ọ bụ na nzọpụta a esiteghị nꞌihe unu jiri aka unu rụpụta.
Ọ bụ Chineke mere anyị ihe anyị bụ! O kere anyị ọhụrụ nꞌime Kraịst Jisọs ka anyị nwee ike ịrụ ọrụ ọma. Nꞌihi na ọ bụ otu a ka o siri kwadoo na anyị kwesịrị ibi ndụ ụbọchị nile.
Ya mere, chetanụ na unu bụ ndị mba ọzọ site nꞌọmụmụ nke a mụrụ unu. Chetakwanụ na ndị Juu ndị kpọrọ onwe ha ndị e biri ugwu, na-akpọkwa unu ndị a na-ebighị ugwu, nꞌihi ihe ndị a e mere ha nꞌanụ ahụ. Chetakwanụ ihe unu bụ nꞌoge gara aga.
Nꞌoge ahụ, ọ dịghị ihe jikọtara unu na Kraịst. Unu bụ ọbịa nꞌebe ụmụ Izirel ndị Chineke họpụtara nọ. Unu enweghị òke nꞌime ọgbụgba ndụ na nkwa nile Chineke nyere ụmụ Izirel. Unu biri nꞌụwa na-enweghị olileanya, na-enwekwaghị Chineke.
Ma ugbu a, site na njikọta e jikọtara unu na Kraịst, unu ndị nọ nꞌebe dị anya, ka e mere ka unu bịaruo Chineke nso site nꞌọbara Kraịst nke a wụsịrị.
Nꞌihi na Kraịst wetaara anyị udo. O mere ka ndị Juu na ndị mba ọzọ buru otu. Ọ kwaturu mgbidi kewera ha na mgbe ochie.
Ọ kagburu iwu ndị Juu ka o nwee ike mee ndị Juu na ndị mba ọzọ otu agbụrụ ndị e jikọtara ọnụ nꞌime ahụ ya. Site nꞌụzọ dị otu a, o mere ka udo dịrị.
Site nꞌọnwụ ya nꞌelu obe, o mere ka ekworo dị nꞌetiti ndị Juu na ndị mba ọzọ gwụsịa. Sitekwa nꞌọnwụ ya nꞌobe, o mekwara ha abụọ ka ha bụrụ otu. O sitekwara nꞌụzọ dị otu a mee ka ha bịaghachikwute Chineke.
Ya mere, Kraịst bịara kwusaa ozi ọma nye mmadụ nile. O kwusara ozi ọma nye ndị Juu nọ nso, na unu ndị mba ọzọ nọ nꞌebe dị anya.
Nꞌihi na ọ bụ site na Kraịst ka anyị nile, ndị Juu na ndị mba ọzọ, nwere ike ịbịa nꞌihu Chineke site nꞌotu Mmụọ ahụ.
Matakwanụ ugbu a na unu abụkwaghị ndị mba ọzọ na ndị ọbịa. Unu esorola ụmụ Chineke nile bụrụ diala nꞌezinụlọ Chineke.
Unu bụkwa ndị a na-ewusi ike nꞌokwukwe site na ntọ ala nke ndị ozi Kraịst na ndị amụma ya tọrọ. Kraịst bụkwa nkume dị mkpa na ntọ ala ahụ.